Mgbe ụfọdụ, n'agbanyeghị gị niile mgbalị kasị mma, o nwere ike otú eme na gị iPad ma ọ bụ ọbụna gị iPhone nwere ike ugboelu na-eduga na ọnwụ nke data. Ọtụtụ mgbe, anyị nwere mwute faịlụ na anyị ngwaọrụ nke pụtara na ị ga-achọ ụzọ naghachi gị furu efu data.
Nke a bụ ebe ndabere faịlụ abata play. Mgbe i nwere iCloud azụ elu agbanwuru ha, na ị ga-enwe ike naghachi gị furu efu data site na-eweghachiri gị azụ elu. Ọ bụrụ na ị na-amaghị otú ime ya, na-eso mfe nzọụkwụ nke anyị ga-edepụta ebe a.
Weghachi a ọhụrụ iPhone / iPad si ẹdude iCloud ndabere
Mgbe ị na-achọ iji weghachi a ọhụrụ apple ngwaọrụ (iPhone / iPad) na otu agadi ndabere, mkpa ka i soro ndị a dị mfe nzọụkwụ.
• Ke ngwaọrụ gị, isi 'Ntọala'. N'okpuru ya, ịkwaga 'General' na mgbe ahụ ego on 'Software Update'.
• Jide n'aka na ekwentị gị nwere ọhụrụ software update iji gaba na nzọụkwụ.
• Ọ bụrụ na ị na-adịghị ọhụrụ melite, download na wụnye ya.
• Ugbu a, i kwesịrị laghachi 'Ntọala' na mgbe ahụ kụrụ on 'iCloud'. N'okpuru 'iCloud', ịkwaga 'Nchekwa' na mgbe ahụ ego 'Jikwaa Nchekwa'.
• Ị ga-ahụ ndepụta nke ndabere faịlụ na ị ga-lelee ọhụrụ ndabere nke ị chọrọ weghachi.
• Ugbu a, laghachi 'Ntọala' ọzọ wee kwaga 'General'. N'okpuru depụtara nhọrọ, pịa 'Tọgharia' na mgbe ahụ họrọ, 'Ihichapu ọdịnaya niile na ntọala'. Nke a ga-enyere Iweghachi ọhụrụ iPhone / iPad.
• Head ka melite nnyemaaka ma họrọ 'Mee elu ngwaọrụ gị'.
• Ị ga-kpaliri ịbanye gị iCloud nzere na gị mkpa iji tinye ha.
• Ugbu a, ị pụrụ ịhụ gị ndabere faịlụ na ị nwere ike họrọ ndị ị chọrọ iji naghachi,
• Pịa on 'Weghachi ndabere' na ị ga-enwe iji weghachi a ọhụrụ iPhone na dịbunụ iCloud ndabere.
Weghachi data si iCloud ndabere selectively
Ọ bụrụ na ị na-achọ iji pụọ na selectively weghachi ndabere gị iCloud, ị nwere ike ka ndị magburu onwe ojiji nke Wondershare Dr.Fone maka iOS. Ọ bụ otu n'ime n'elu software nke ga-atụgharị si na-kemfe n'ụzọ dị iche iche. Ebe a bụ ụfọdụ n'ime n'elu atụmatụ nke ọ na-enye.
• Ọ bụ ihe na iPhone / iPad data mgbake ngwá ọrụ nke na-enyere iweghachi data ọbụna mgbe ọ na-e mmadụ na mberede furu efu, ehichapụ ma ọ bụ ọbụna Ị.
• Ị nwere ike ihuchalu faịlụ n'ihu na-agbake ha.
• E nwere dị iche iche mgbake ụdịdị ghota si.
• Ị nwere ike naghachi a otutu dị iche iche faịlụ formats. Lee ndị nkọwa.
• Ọ dị mfe iji na-achọ obere ma ọ bụ ọ oru ihe ọmụma.
Na ọtụtụ atụmatụ, ewu ewu na nke ngwá ọrụ a bụ ziri ezi. Mgbe ị na-achọ iji weghachi backups selectively, ebe a bụ nzọụkwụ mkpa ka i soro.
• Wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS na gị na PC na ẹkedori ya.
• Họrọ 'mgbake mode' nhọrọ ke ufọk ihuenyo.
• Họrọ 'naputa site na iCloud ndabere' site nhọrọ.
• Ị ga-kpaliri ịbanye gị iCloud nbanye nzere.
• Wet nkọwa na nbanye gị iCloud. Nke a software adịghị echekwa ọ bụla nke gị nbanye nzere.
• Mgbe i wee banye na, ị ga-ndepụta nke dị iche iche ndabere faịlụ nke di ugbu a na gị iCloud akaụntụ.
• Họrọ nkwado ndabere na mpaghara nke ị chọrọ iji weghachi na pịa na download button nke ga-adị ugbu n'akụkụ aka họọrọ azụ elu faịlụ.
• Ị ga-ahụ a na ihuenyo-arịọ gị ka ịhọrọ faịlụ na ị chọrọ naghachi. Ị nwere ike ịhọrọ 'họrọ ihe niile' ma nke a nhọrọ ga abuana ndị fọdụrụ n'ezinụlọ oge.
• Kwesịrị, ị kwesịrị ị na họrọ ndị niile faịlụ nke ị chọrọ iji naghachi na iwelata ngụkọta Doppler oge.
• Mgbe oge ụfọdụ mechaa na Doppler-agwụ agwụ, ị ga-ahụ ndepụta nke faịlụ na nọ na ngwaọrụ gị.
• Ị nwere ike ihuchalu faịlụ ma họrọ ndị nke ị chọrọ weghachi.
• Ugbu a pịa naghachi na ibà ụzọ ebe ị chọrọ ka echekwa faịlụ.
Ị ọma weghachi furu efu faịlụ site na gị họọrọ azụ elu faịlụ.
> Resource> iCloud> Iweghachi iPhone / iPad Site iCloud ndabere dịtụbeghị Ya mere Easy